Dagaal u dhaxeeya ciidamada dowladda iyo Al shabaab oo ka dhacay deegaanka Bariire – Somali Top News
Dagaal u dhaxeeya ciidamada dowladda iyo Al shabaab oo ka dhacay deegaanka Bariire
May 9, 2019 Somali Top News	0 Comments
Dagaal culus ayaa xalay waxa uu ka dhacay deegaanka Bariire ee Gobolka Shabeellaha Hoose,waxaana uu u dhaxeeyey Ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo kuwa Ururka Al-Shabaab.
Dagaalka ayaa yimid kadib markii ay Al-Shabaab weerareen deegaanka Bariire oo hoostaga degmada Awdheegle halkaas oo maalma ka hor ay Ciidanka dowladda la wareegeen,waxaana dadka deegaanka ay sheegeen in uu dhacay dagaal culus oo mudo saacad ka badan socday.
ilaa iyo hadda sirasmi ah looma oga khasaaraha labada dhinac kasoo gaaray dagaalkaas maadaama ay aheyd xilli habeen ah oo badi dadka ay wada jiifeen,isla markaana aan la ogaan karin khasaaraha ka dhashay.
Saraakiil ka tirsan Ciidamada xoogga dalka ayaa waxaa ay sheegeen in Al-Shabaab ay doonayeen inay dib ula wareegaan deegaanka Bariire, hayeeshee Ciidamada DANAB oo ku sugan halkaasi ay iska difaaceen weerarkii kaga yimid dhinaca Al-Shabaab.
Wararkii ugu dambeeyey ee saakay naga soo gaaraya deegaanka Bariire ayaa waxaa ay sheegayaan in Ciidamada Dowladda ay wadaan dhaq dhaqaaqyo Ciidan oo ay ku baadi goobayaan Xubnaha ka tirsan Al-Shabaab ee xalay weerarka kusoo qaaday.
← Safiirka Shiinaha u fadhiya Soomaaliya oo casumaad u fidiyay dowladda Soomaaliya
Afduub ka dhacay magaalada Muqdisho iyo ciidamada Booliska oo howlgal ka sameeyay →
Salaad Cali Jayle oo sheegay in Dibadbaxyada ka dambeeyaan Imaaraadka
Mareykanka oo markii ugu horeysay ka hadlay xiisada u dhaxeysa Somalia iyo Kenya
Ra’isul Wasaare Kheyre oo gudoomiya Shirka Tubta Horumarinta Arrimaha Bulshada